Thola ukuthi iziphi izishingishane eziningi ezenzeka ezweni elithile | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Kukuliphi izwe lapho iziphepho zenzeka kakhulu? Thola!
Isikhathi senkanyamba sizoqala ezinyangeni ezimbalwa, futhi kunamazwe asevele elungiselela ukubhekana nemiphumela angaletha okungcono kakhulu ngangokunokwenzeka. Enye yazo United States, izwe emhlabeni lapho kuba khona izivunguvungu eziningi ngonyaka.
Ufuna ukwazi ukuthi kungani?
Imephu yaminyaka yonke yeziphepho phakathi kuka-1950 no-1995 kusuka ku-National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)
Kuvela ukuthi indawo ye-orographic ilungele ukuthi lezi zinto zenzeke. Enyakatho sinesisindo somoya esibandayo esivela eCanada esihlangabezana nobunzima bomoya oshisayo ovela eGulf of Mexico. Phakathi kwalezi zindawo ezimbili iThafa Elikhulu liyisicaba, into ethanda ukuba neziphepho zenzeke.
Inkinga enkulu abaseMelika ababhekene nayo yilena: yize amakhaya amaningi enendawo ephephile yokuzivikela, cishe zonke iziphepho zenzeka ebusuku, lapho sebevele belele, into eyenza ukulimala kwempahla nokokomzimba kubalulekile, ngoba bangashiya abangaphezu kwamashumi amabili abashonile.
Zenzeka ikakhulukazi entwasahlobo nasekwindla, futhi cishe njalo ezifundeni ezifanayo, kufaka phakathi: Oklahoma, Nebraska noma Kansas. Eqinisweni, le ndawo yaziwa njenge umgijimi wesiphepho, ngenxa yenani lazo ezivela unyaka nonyaka kulezi zindawo. Lapho iphela, yiNational Weather Service (NWS) ebhekene nokuyihlola. Lokhu kuyinto eyenzayo ukunquma isivinini somoya nobukhulu bomonakalo, eyaziwa njenge-Enhanced Fujita noma i-EF. Ngakho-ke, sizoba ne-EF0 uma nje idale umonakalo omncane, noma i-EF5 lapho icekele phansi wonke amadolobha noma amadolobha.
Sethemba ngokushintsha kwesimo sezulu kanye namazinga okushisa anyukayo ziya ngokwanda iziphepho, nangamandla amakhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Kukuliphi izwe lapho iziphepho zenzeka kakhulu? Thola!
yoamil leandro ortega kusho
Ngiphawule kuprofesa we-physics laboratory e-iutval, ngifaka umbala komoya ngibhekise kumashiyali amasosha lapho izindiza zindiza futhi zifaka umbala ngokufanisa ifulegi, umbuzo uthi yonke into ine-conductivity, ithatha umswakama njengesethenjwa. Ngikushiyela okuthile, wena yenza okunye, ngibone amadoda amabili ngaphakathi ethaveni e-la isabelica, eyodwa iphethe isikibha se-adiada, yenze isithunzi kimi ukuthi inezikhali, ngaphinde ngayibona futhi yafana nalena esendaweni yokucima ukoma ibishayela imoto Amaphoyisa, benginovalo futhi ngatshela umfowethu, kunabomakhelwane la ukuthi abakwenzayo kungifaka uvalo, abanye bayangiphatha kabi abanye bafuna ukungihlupha.
Phendula ku-yoamil leandro ortega
Yini imvula ebomvu?
Izingwadule ezisongelwa ukufudumala kwembulunga yonke